သင့်၏ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာများကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်သည့် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရမည့် အမူအကျင့် ၅ ခု - Hello Sayarwon
သင့်၏ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာများကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်သည့် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရမည့် အမူအကျင့် ၅ ခု
ပန်းနာရင်ကြပ်ထဖောက်လိုဖောက်ငြား သင်သည် အရေးပေါ်ကုသမှုအား တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရှာဖွေထားရန်လိုအပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် ပန်းနာရင်ကြပ်သည် အကြိမ်ကြိမ်ရုတ်တရက်ထဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုအချိန်တွင် ဆရာဝန်အားဆက်သွယ်ရန်မှာ ခက်ခဲတတ်သည်။ သို့သော်လည်း သင့်၏အပြုအမူအနေအထိုင်ပြောင်းလဲမှုအချို့သည် ပန်းနာရင်ကြပ်ထဖောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သင့်ဆေးများကို သောက်သုံးပါဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အကြံပေးချက်များကို လိုက်နာရန်ခက်ခဲတတ်သည်မှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဝေဒနာရှင်အများစုသည် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ဆေးများကို မသောက်သုံးနိုင်ကြပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဆေးညွှန်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးများပြားခြင်း၊ဆေးပေးသည်အချိန်ကာလသည် အလွန်ကြာမြင့်ခြင်း၊ဈေးအလွန်ကြီးခြင်း(သို့)ဆေးများကို အချိန်မှီသောက်သုံးရန် မေ့လျော့တတ်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင့်တွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိပါက ထိုပြဿနာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ သင့်အားညွှန်းထားသောဆေးများကိုသေချာလိုက်နာသောက်သုံးမှုရှိမရှိသည် သင့်၏ ပန်းနာရင်ကြပ်ရလဒ်တွင်အရေးကြီးသည့်နေရာမှပါဝင်သည်။ သင့်၏ထိုဆေးများသည် သင့်၏ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါအားထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကူညီပြီး ပိုမဆိုးဝါးသွားစေရန်လည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် သင့်ကိုယ်သင်ကောင်းနေပြီ၏ဟု ယူဆ၍ သင်သည်ဆေးများသောက်ရန်မေ့နေတတ်သည်။ သို့သော် သင့်တွင်ရင်ကြပ်ဝေဒနာ မဖြစ်သေးခြင်းသည်ရင်ကြပ်ဝေဒနာ သင့်တွင်ဖြစ်မလာနိုင်တော့ဟု မဆိုလိုပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါသည်။ သင့်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိပါက သင်သည်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်နှလုံးနှင့်အဆုတ်များကို သန်မာစေပါသည်။ ပန်းနာရင်ကြပ်သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ပြဿနာဖြစ်သောကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေပြီး သင့်၏ရင်ကြပ်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တွင် သင့်ဆရာဝန်သည် သင့်၏ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါအားထိရောက်စွာသီးခြား အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားတတ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်အမြဲသတိရပါ။ အေးသောအပူချိန်တွင်သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါက သင့်နှာခေါင်းအား မျက်နှာဖုံးတစ်ခုနှင့်အုပ်ပြီး သင်ရှူသောလေအားနွေးထွေးအောင်လုပ်ပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်ရန် ထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်လွန်ကဲခြင်း(သို့)အဝလွန်ခြင်းသည်လည်းသင့်၏ရင်ကြပ်ရောဂါလက္ခဏာများကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီး သင့်ရောဂါအားထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည့်သင့်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချပေးသည်။BMI 30 နှင့် 30အထက်ရှိသူများသည် ရင်ကြပ်ရောဂါရှိရန်ပို၍ဖြစ်နိုင်ချေများသည်။ ရင်ဘတ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်အနီးနားရှိလွန်ကဲများပြားနေသာကိုယ်အလေးချိန်သည် သင့်အဆုတ်များကို နှောင့်ယှက်ထိခိုက်စေပြီး ပုံမှန်အသက်မရှူနိုင်အောင်လည်းပြုလုပ်သည်။ ထပ်ပြောရလျှင်အဆီတစ်ရှူးများသည် ပန်းနာရင်ကြပ်အားဆိုးဝါးစေနိုင်သည့် ရောင်ရမ်းစေသောပစ္စည်းအချို့ကိုလည်းထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါအားထိခိုက်စေနိုင်သောစိတ်ကျရောဂါနှင့် obstructive sleep apnea (အိပ်နေစဉ်တွင် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ဟောက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်စေသောရောဂါ) ကဲ့သို့သောအခြားရောဂါများကိုလည်း အဝလွန်သူများသည် ခံစားရနိုင်ပါသည်။
ဆေးလိပ် နှင့် မီးခိုးအငွေ့များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဆေးလိပ်နှင့် အခြားသောမီးခိုးအငွေ့များသည်ပန်းနာရင်ကြပ်နှင့် ကောင်းသောတွဲဖက်မှုမဟုတ်ပါ။ ဆေးလိပ်ဖက်ကြမ်း၊ဖယောင်းတိုင်၊ဗျောက်အိုး၊မီးရှူးမီးပန်း(သို့)ရေနံဆီများမှ အငွေ့များသည် ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာကို ဖြစ်ပွားစေတတ်သည်။ စီးကရက်များသောက်ခြင်းသည်လည်း အဆုတ်ကင်ဆာ၊လည်ချောင်းကင်ဆာ၊နှလုံးရောဂါ၊သွေးတိုးခြင်းနှင့်အရေပြားရောဂါများ စသောရောဂါများကိုလည်းဖြစ်ပွားစေတတ်ပါသည်။ သင့်တွင်ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိပြီး ဆေးလိပ်လည်းသောက်ပါက ဆေးလိပ်ကို တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဖြတ်ပါ။ သင့်အနားနှင့် သင့်အိမ်၊သင့်ကား(သို့)သင်ကြာကြာနေသည့် မည့်သည့်နေရာတွင်မဆို မည်သူမျှဆေးလိပ်မသောက်ပါစေနှင့်။
သင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါအတွက် သင့်အိမ်အား လုံခြုံ ဘေးကင်းအောင်ထားပါ။
မှိုများ၊ဖုန်မှုန့်များနှင့်တိရိဆန်အမွှေးများသည် သင့်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါအားဖြစ်ပွားစေတတ်သည်။ သင့်တွင်အိမ်မွေး
တိရိဆန်ရှိပါက အခြားသို့မွေးရန် ပေးလိုက်ပါ။ သင်သည်အိမ်မွေးတိရိဆန်များဆက်လက်မွေးလိုပါက အိမ်အပြင်တွင်(သို့)သင့်အိပ်ခန်းနှင့်ဝေးရာတွင်ထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါ။ သင့်၏အိမ်မွေးတိရိဆာန်များကို ပုံမှန်ရေချိုးသန့်စင်ကာအမွှေးများကျွတ်ခြင်းကို လျှော့ချပါ။ လေအေးပေးစက်တခုကို သုံးကာစိုထိုင်းဆကို ထိန်းချုပ်ပြီး ရေမှော်ပင်၊သစ်ပင်နှင့်မြက်ပင်များမှလာသည့် လေထုအတွင်းရှိအမှုန်များကို ဖယ်ထုတ်သန့်စင်ပါ။ လေအေးပေးစက်တပ်ထားခြင်းသည် သင့်အားဖုန်မှုန့်အညစ်အကြေးများထိတွေ့မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ မှိုများသည်သင့်ရေချိုးခန်း၊မီးဖိုချောင်(သို့)သင့်မြေအောက်ခန်းထဲတွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထိုနေရာများကို ပုံမှန်သန့်ရှင်း၍ မည်သည့်ရေမျှစိမ့်ဝင်ယိုထွက်ခြင်းမရှိရန် ပြုပြင်ပါ။ သင်သည် နှာခေါင်းစည်းတစ်ခုဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်စဉ်တွင် သင့်နှာခေါင်းနှင့်မျက်နှာအား အုပ်ထားပါ။ သင့်တွင်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိပါက တစ်သက်လုံးထိုရောဂါနှင့်နေသွားရသည်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ရုတ်တရက်လည်း ဆိုးဝါးစွာထဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ သင့်၏အမူအကျင့်များကို ပြောင်းလဲပြီး သင့်တွင်ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတတ်သည့် ရင်ကြပ်ဝေဒနာများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Asthma and Smoking. http://www.webmd.com/asthma/guide/asthma-smoking#1. Accessed June 24, 2017.
တုပ်ကွေး လား ကိုဗစ်လား မသေချာရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။
အိမ်ထဲမှာ တုပ်ကွေး ကူးစက်မှု နည်းစေဖို့